Gali isku-dhafka UTM ee Google Earth, laga bilaabo Excel! - Gofumed
Gali isku-dhafka UTM ee Google Earth, laga bilaabo Excel!
Nofeembar, 2007 Cartografia, Google Earth / Maps
Google Earth wuu awoodaa muujiyaan isuduwayaasha UTM iyo juqraafi, laakiin suurtagal maaha inay galaan UTM nidaamka iyo xitaa haddii aad samayso waa inaad mid mid u samaysaa.
Qalabkan waxaa loogu yeeraa Excel2GoogleEarth waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto dhibco miiska sheyga ah iyada oo aan loo baahnayn isticmaalka barnaamijka mapping.
Barnaamijku waa macquul sare oo dhisto faylka xml. Macluumaadka waxaa ka mid ah:
Xulashada xulashada lat / dheer ama UTM xogta, xulashada aagga iyo qeybta dhexe.
Digniinta: shahaadooyinka waa in ay noqdaan tobanle, iskudhafyada miisaankoodu yahay, wgs84, haddii aad ku jirtay meel kale, sida GRS80 ama Nad27 waa inaad beddeleysaa.
Markaas waxaad dooran kartaa liisaska sare ee meesha xogta lagu keydiyay iyo goobta xigta amarka.
Waxaa suurtagal ah in lagu daro ilaa shan goobood oo xog ah, oo ay ka mid yihiin: isku-duwid, isku-duwid, heer sare, magac dhibic, lambar aqoonsi
Meelaha soo socda, waddada faylka la socota iyo magaca feylka la soo saaro waa la xilsaaray. Waxay sidoo kale aqbashaa sharaxaadda faylka.
Sadarka dhinaca midigta ayaa muujinaya ikhtiyaarka lagu magacaabo sare u qaadka dhibcaha, haddii aan dooneyno in ay ku dhufato sareeya sida ku xusan macluumaadka aan bixino ama haddii aan rabno Google Earth in ay muujiso dhulka dusha dhulka
Marka ugu fiican ee aad haysato, waxaad dooran kartaa calaamadda ikhtiyaarrada kala duwan ee Google Earth, iyo cabbirka kan midkan.
Waxay abuuri kartaa dhibaatooyin, haddii macaamiishu ay naafo yihiin, sidaa darteed, tan waxaa lagu dooranayaa:
Waxaan u hawlgaleynaa kuwa ugu hooseeya, waana aqbalnaa
Ka dibna keyd file faylka
waan xirnaa oo mar kale ayaan soo galnay.
Halkan waxaad ka soo dejisan kartaa codsiga Excel2GoogleEarth
En Xiriirintan waxaa lagu arki karaa Codsiyo badan oo Zonum ah; si aad u aragto UTM isuduwidda Khariidadaha Google waxaad isticmaali kartaa Iskuduwaha.
Iyadoo qalabkani aanu hadda jirin, shaxankan Geofumadas wuxuu u oggolaadaa UTM isku duwaha in loo dhoofiyo Google Earth
Post Previous«Previous Geofumadas on duulimaadka November 2007
Post Next Iskudhafyada wax soo saarka ee laga soo dhisa CADNext »
66 Jawaab in "Ku qor UTM isuduwidda Google Earth, laga bilaabo Excel!"
Waxay yihiin isuduwayaasha la filayo, waxay noqon karaan UTM ama u-bedelida waddankaaga.
Isku-duwaha ugu horreeya waa Y yada kala duwan, sababtoo ah waa isku-duwaha ka yimaada qulqulka haddii ay ku jiraan bartamaha waqooyiga.
Midka labaad waa X, oo kala duwan, maaddaama aysan waligeed ka yarayn 500,000 taas oo inta badan waa mid been ah.
Waxaad u baahan tahay inaad ogaato qoraalka, kaas oo noqon kara WGS84, NAD27 ama wax kale.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato aagga, iskudhafyadaas waxaa lagu soo celiyaa meelaha 60 ee laga yaabo.
Waxaa jira sheybaaro, kuwaas oo kuu oggolaanaya in aad u guurto iskudhafkan kuyaala juqraafi, laakiin waxaad daryeeshaa ogaanshaha macluumaadkaas; xaafad, aag iyo lafdhabarta.
ELVIS FRANCO isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay in aan ogaado nooca cordenades ee kuwan yihiin, waxaanan u baahanahay inaan u bedelo heerarka juqraafiga, daqiiqadaha iyo daqiiqadaha, halka lambarka koowaad uu yahay cordenada X iyo kan labaadna cordenada Y. waa degdeg
Brick La Fe 1.412.034 882.933
Beytlaxam oo loo yaqaan '1.409.806 881.604'
Daanyeeradii 1.402.385 880.695
Q. Quebradona Norte 1.398.006 882.564
Q. Quebradona Sur 1.396.202 882.239
Burushka loo yaqaan 'Quebrada 1.399.511 889.389'
Xulka '1.450.443 755615 Stick Stick Stick
Masayr 1.461.198 767939
Quruxda 1.507.883 833.630
Boggii hore 1.498.719 830.819
Qalabka 1.504.349 836.021 Drum
Qufulka 1.488.840 872.877
Tendal 1.498.851 855.696
Khariidadda 1.470.110 833.090
Filimka "Papayo 1.470.790 835.145"
Xarafka "1.478.498 825.054"
Ortiz 1.462.931 838.785 durdur
Xarafka "1.379.693 855.868"
Sanduuqyada Sanduuqyada Lorica 1.495.566 807.417
Maryan 1.515.711 802.866
Ammaanta 1.506.946 794.680
Galan Vega Fadul 1.465.155 747405 Xiriiriyaha
Pesquera 1.375.238 852.113
Cerromatous 1.366.347 836.528
Karaa 1.350.907 Gorge 841.980
Dekadda 1.353.234 839.020
Afka hore ee Uré 1.370.715 841.985
Qolka 1.453.910 806.682
Xaraashka 1.455.280 805.787
Nacnaca 1.419.870 794.290
Siberiyaanka 1.443.341 811.472
Rajada 1.471.488 778.073
Andes, hore I 1.442.200 792.841
Andes, hore II 1.441.345 792.917
Raw Rooster 1.439.358 792.640
The Calichal 1.440.458 801.797
Xamaamyada 1.425.942 788.832
Garzones 1.468.306 804.323
Xaafadda Santafé 1.459.669 799.527
Cusbitaalka hore 1.459.480 800.197
Xilliyada 1.391.528 829.391
Fikrad cusub 1.389.311 826.240
Oohinta loo yaqaan 'Hil Hill 1.388.488 824.900
Oohinta loo yaqaan 'Hil Hill B 1.388.768 825.084
Cajiib 1.410.586 827.561
Bowlka Sonkorta 1.415.055 830.081
Mammon 1.429.708 846.534
The '1.425.246 859.696 Piñal'
Tight 1.493.352 761669
Lubnaan 1.491.900 776084
Qorshaha 1.486.978 760387
Quarry 1.480.850 772357
Macaws 1.364.329 819.916
Red Lathe A 1.373.534 837.376
Red Lathe B 1.373.316 837.828
Midowgii 1.365.186 823.512
Marañas 1.483.053 847.393
Aamusnaanta 1.458.455 838.225
Saint Helena 1.455.703 853.363
Arena 1.505.850 839.468
Wadada 1.509.098 839.678
Palmitos 1.507.250 838.386
1.437.513 822.185 Crystal
Burgos Quarry 1.459.237 823.683
Xaragada 1.438.052 823.285
Carrillo 1.485.880 806239
Nederland '1.486.145 793452'
1.395.925 779033 Rafts
Guriga addoonsiga 1.393.195 779066
Xaashida 1.410.826 781569
Volcano 1.410.207 766460
Laydhka 1.405.484 767519
ayaa hoos u dhacaya,
isku day in aad gashid lambarka tirada badan, tusaale ahaan 5928472 iyo dherer 678747
Siyaabo kale ayaa loo badalayaa in lagu beddelo juqraafi
FABIA RUIZ isagu wuxuu leeyahay:
HELLO Waxaan u baahanahay caawimaad deg deg ah, waxaan ku jiraa mashruuc halkaan ugu baahanahay inaan arko isfahamka xayeysiiska ee GOOGLE DHEXE, AMA KU SAMEE LAGU SAMEEYO WAQTIGII LABAAD EE AAD KU SAMEEYSAA INUU KUGU SAMEEYO MARKA DHAQAALKA, isku day inaad kuhesho sumcadda shabakada Internetka ee OPLE oo ha ku biirin ... ..Shanks
Rene isagu wuxuu leeyahay:
Xaalad haddii aad gali karto UTM ama isku-duwid juquraafi ah si loo abuuro faylka KML (http://ingeapps.com/apps/online/kml-file-creator). Sidoo kale marka la akhrinayo faylka KML wuxuu soo saari karaa UTM ama geo-graphic (http://ingeapps.com/apps/online/kml-file-reader).
Hello, xiriirada hoose waxaad ka heli kartaa laba dalab oo online ah si ay ula shaqeeyaan kml faylasha:
Marka hore wuxuu abuuraa faylasha kml oo ku salaysan faylka Excel ama CSV
Diiwaanka labaad ee akhriska kml iyo dhoofiyaa qaabka CSV
Gee, hindisaha Juan waa mid aad u cad, nasiib darro ah inay timaado waqti dambe markii ay dad badan codsanayeen wax isku mid ah.
ee jihada this waxaad ka heli kartaa template ah oo aad ku sheegto bilowgii, kaliya in ay u shaqeeyaan waa inaad ku soo celisaa taariikhda mashiinkaaga 2006, laakiin, waxay kuu tilmaameysaa in mudada tijaabada lagu dhammaanayo: http://www.zonums.com/excel2GoogleEarth.html
xiirid isagu wuxuu leeyahay:
Marka aan rabo in aan soo saaro faylka KML, waxay ii sheegeysaa in liisanka beta uu dhacay iyo in uu tago bogga http://www.zonums.com oo raadi cusbooneysiin ... .kee dhacdaa?
Edwin Becerra isagu wuxuu leeyahay:
Wanaagsan, mahadsanid taladaada
nacho isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan daganaa google earth Pro, laakiin waxaan ula jeeday in gelinta xogta sidan oo kale ah -17.54737883, -63.70439899 ay uga hadho hal sadar miisaska exel. iyo ikhtiyaarka qaabka tiirarka, waxaa jira laba uguyar.
waad ku mahadsantihiin talada.
Alli ayaan mar dambe sii daayo.
Si aad u gasho liistada Google Earth Pro.
Ama samee kml barnaamijka GIS
dejinta isuduwayaasha soo socda ee ay kala tagaan jumlad, waxay noqon lahayd mid halbeeg ah, ugu yaraan waa labo, sidee baan u xalliyaa?
Xasuuso in Google, loo isticmaalo nidaamka Lat / Long
Waxaa loola jeedaa in aad marka hore gelinayso iyo ka dibna X
wuxuu u qoraa foomka:
Latitude waa wax xun sababtoo ah waxay ka hooseysaa qulqulka
Dhererka waa wax xun sababtoo ah waa galbeed oo ka tirsan Meridian Greenwich.
Waxaad isticmaashaa dhibicda jajab tobanle ah iyo uumi si aad uhesho labada isku-duwood
Isku day in aad ku dhacdo meesha aad filayso
Saaxiib ayaan mar horeba u beddelay isku-duweyaalkayga iyo bidixda kuwan
X 426361 iyo 8060186 kuwani Long. 63,70439899 Lat.17,54737883.
Waxaan abuuray Kml ah isuduwidyada juqraafi, waxayna igu sawiraan lineka Ecuador, taas oo noqon karta mid xun?
hectoranchez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan qaato koorsada
Waa inaan bedelaa isdhexgalka UTM ee juqraafi.
Si toos ah Google Earth, waxaad ku geli kartaa isku-duwaha joqraafiga (darajada jajab tobanle sida 35.02, -15.423)
Sidaas darteed waxaad dooneysaa inaad u bedesho isku-duwidda UTM ee qorsheysan ee ku saleysan juqraafiyada.
Laakiin sidee ayaad u soo galaysaa?
Waxay saameyn kartaa qaabka kala-guurka ee kumanaan iyo jajab tobanaad ee ku jira Windows.
Tani waxay ku xiran tahay Start> Control Panel> Settings Regional
Miisaaniyadda kumanaan waa inay ahaato jamac, jajab tobanle, iyo jajab tobanle.
Markaas dhibaatadu way jirtaa! Si toos ah ayaan u galayaa xogta.
Waa maxay barnaamijku marka hore galo xogta?
Waxay ka socdaan aagga 20 Southern Hemisphere.
Si aad u bilowdo, barnaamijkee ayaad isku dayeysaa inaad gasho?
Haddii ay toos u leedahay Google Earth, ma jiraan wax isku xiran UTM, kaliya iskuduwaha juqraafi.
Saaxiib ayaa u mahadcelinayaa caawimaadda, laakiin ma heli karo qodobbada inaan ku dhaco meesha saxda ah, waxa aan haysto waa geesoole leh iskudhafyada:
Isuduwaha. X Coord. Iyo
Waan quusanayaa, maxaa khaldami kara? Waxaan sameeyay xoogaa hagaajin ah gudaha
dhulka google iyo waxba !! Waxaan si weyn u jeclaan lahaa gargaarka.
Maya, ma xuma. Qeybta koonfureed, isuduwaha waa Bari, Koonfur.
X, Y waxay la mid tahay Bariga, Koonfurta. Haddii aad joogtid hemisphere koonfureed, dhirirka ah ee Peru, isku-duwayaashaadu waa inay fiicnaadaan.
Fiiri Google Earth, waxay sababi kartaa jahwareer. Isku-duwaha UTM-yada had iyo jeer dhanka waqooyi waxay ku darayaan qaabka 'X, Y', farqiga u dhexeeya waqooyiga hemisphere wuxuu ka bilowdaa isudheelada oo loo yaqaan xiriiriyaha N (North). Koonfurta hemisphere-ka waxay ka bilaabataa meel ka hooseysa Patagonia waxaana loogu yeeraa isku-duwaha S (Koonfurta)
Marka, ma laga yaabaa inay isuduweyaashu khaldan yihiin? maxaan sameyn karaa ?? fadlan aad ayaan ugu mahad naqayaa kaalmada, waxaan hayaa dhibco badan oo aan aado google dhulka! mahadsanid
Waxa dhaca waa in koonfurta hemisphere Y iskuduwaha Y badanaa waxaa loo isticmaalaa Koonfurta ahaan. Waa inaysan dhibaato kuu keenin.
Waxaan hayaa isku-duwayaasha noocan ah: X: 425241
Y: 8059751 waxay ka socdaan shay GPS ah oo leh nidaamka WGS84, safka taxanaha waxaan u baahanahay inaan dhigo "West iyo South", laakiin waxaa jira oo keliya "Bariga iyo Waqooyiga".
Taasi wax ma bedeli kartaa? Waad mahadsantahay
Waxaad ku geli kartaa xogta khalad ah, waxaa suurtagal ah in lagu jahwareeriyo cutubyada.
hello, barnaamijku wax badan ayuu i caawiyay laakiin markii aan keeno faylka .kml ee google earth waxaan ka helaa meesha koonfurta ku taal! ma i caawin kartaa ??
Sida muuqata nidaamka aad ku shaqeyneyso ayaa leh sida keli keli keli keli keli ah (,) iyo jajab tobanle ah dhibicda (.)
markaa waa inaad u isticmaashaa x = 671628.4564 Y = 4230634.274
Indigo isagu wuxuu leeyahay:
Ma saxeexi karo isuduwayaasha si sax ah. Haddii aan tusaale ahaan ku jirey UTM:
Latitude = Waqooyi
Miyay tahay inaan galo comma ama dhibic? Waa in ay raacaan nooc kasta oo gaar ah? Marka aan dhoofiyo, had iyo jeer waxaan ku dhejiyaa qodobada:
180 ° 0'0.00 "N
1 ° 0'0.00 "O
Waad ku mahadsantahay aad u sii horeysay.
Juan Carlos isagu wuxuu leeyahay:
Habeen wanaagsan oo aan soo dejiyo barnaamijka laakiin waxay u muuqataa in shatiga uu dhacayo, maadaama aan ka saarayo qaybtaas iyo barnaamijka
Liiska, haddii ay yihiin qaab dheer, qaab jajab tobanle ah, waxaa jira qaabab loogu badalo karo kml si loogu daawado Google Earth. Wadooyinka, kama sameyn kartid Google Earth sababta oo ah waxaad ku dhexjirtaa shabakada wadooyinka guryaha leh guryaha lagu sameeyo falanqaynta shabakada, taasi waa la sameyn karaa laakiin barnaamij GIS sida gvSIG, ArcGIS, iwm.
Mario Traub isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan qorayaa inaan kuu sheego in aan haysto liis dheer oo cinwaano ah iskudhafkooda iyo wax walba. Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay jirto hab lagu galo cinwaanada Google Earth iyo sidoo kale in la garto wadooyinka iyaga oo loo marayo.
Way fiicnaan lahayd haddii qof i caawin karo.
Isticmaal xaashida beddelaadda UTM si aad u ogaato juqraafi, waa qaybta download ee boggan.
Richard isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan leeyahay iskudhacyadan sida muuqata waxay yihiin PSAD56, sidee baan u bedeli karaa UTM (WGS84)
Mid ka mid ah isuduwayaasha kuwaas oo la mid ah 2000 iyaga magacooda ama sharaxaadooda, sida aan ku dhejiyay dhulka google. waad ku mahadsantihiin jawaabahaaga
Anigu waxaan leeyahay iskudhacyo kuwan (waxay ka yimaadeen Peru) oo ka soo jeeda waqooyiga (Piura Talara), laakiin sida muuqata waxay yihiin iskuduwaha PSAD-56
1597685 134936; sida aan ugu beddelo UTM-WGS84; Haddii cidi i caawin karto waan ka mahadcelin lahaa. Arrinta kale ayaa ah inaan haysto 2000 oo ka mid ah isku-duwayaashan oo aan doonayo inaan ku dhigo Google Earth; sidaan sameeyo; i caawi fadlan
Magacaaga ku qor ... isagu wuxuu leeyahay:
Habeen wanaagsan, su’aal aan istcimaalayo barnaamijka 'Epoint2GE', wuxuu abuuraa faylka klm laakiin markii aan ku xiro Google Earth waxba iima tusayso, way iga caawin karaan dhibaatadan, maadaama aanan garanayn waxa dhacaya
Habeen wanaagsan, hal su’aal oo aan adeegsanayo barnaamijka Epoint2GE, wuxuu abuuraa faylka klm laakiin markii aan ku xiro Google Earth waxba iima tusin, way iga caawin karaan dhibaatadan
Google Earth ma heli kartid isku-duwaha lagu soo bandhigay, calaamada kaliya ama calaamadda dhibicda.
Haddii aad rabto inaad soo bandhigto isku-duwaha, waxaad ubaahnaan doontaa inaad u gudubto tiir ahaan astaamo waxaana lagu soo bandhigi doonaa calaamad.
Si aad u doorato Google Earth waxa aad fileyso in la geyn doono, taabo lakabka, dooro guryaha ka dibna wadaag astaamaha. Halkaa waxaad ku qeexi kartaa nooca dhibicda aad filanayso.
Isidora isagu wuxuu leeyahay:
hello guys, Waxaan isticmaalaa Epoint oo leh isku-duulimaadyada UTM, laakiin marka aan u gudbiyo dhulka google, iskudhafyada dhibcaha ayaa baaba'aya ... oo kaliya calaamadaha ayaa u muuqda marka ay dhibic o, o. Maxaan sameeyaa? Waxaan u baahanahay si deg deg ah, sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa wax badan haddii aad i caawin karto
William isagu wuxuu leeyahay:
hello Waxaan jeclaan lahaa qofkii i caawimi karo waxaan doonayaa inaan dhoofiyo jidka taleefanka gacanta ee google-ka si aan u aragno waxaan haystaa iskudhafyada faylka excel oo ay sidan yihiin -12.06959-79.98166 iwm. Waxaan ka socdaa Peru iyo emailkaygu waa jwmaceto@hotmail.com.
OSCAR J isagu wuxuu leeyahay:
WANAAGSAN DHAMAAN, cusayb baan ka ahay in this, Waxaan u suurtagashay Soma-gaadhi GPS laakiin waxaan rabaa in aan ogaado sida si loo ogaado BAABUURKA EE SAX AH SITE LOCATION MARKA KALIYA i siiyo isuduwaha ee jajab tobanle. QAYBTA IN WAA IN GALAYA loolka MACLUUMAADKA iyo dhigaha. Waxaan jecelahay DADKA si weyn doonaya inay iila si tartiib ah u SAABSAN muujiyo.
Faylal noocee ayaad u leedahay?
Haddii ay kml ku jiraan, waa inaad mar labaad wacdid.
Haddii aad ka dhigan tahay sawirka dayax-gacmeedka ee ku yaala kaydka, haa, taasi waa luntay.
MARCUS isagu wuxuu leeyahay:
NOOOOOO YAVA YAVA .. A yar su'aal .. AAN LA GOOGLE dunida GOOGLE .. HADDII AAD bixi dunida PLUS tirtirtaa Faylasha E¿QUE GUERDADOS IN THIS HOR ... ?????
HEYYY Laakiinse mahad .. hehe WEENO dhacay .. A INTA RAAAAAATO jejje jiididda BUUGGA .. laakiin mahad ..
Waxaan fahansanahay in qalabkii dhacay, laga soo dejiyey halkan:
Laakiin Google Earth wuxuu u oggolaanayaa inuu xareeyo xogta, illaa iyo inta ay yihiin woqooyiga / xajmiga ee qaabka jajab tobanle, iyo wgs84
Halkan waxaan ku sharxeynaa sida
WEEENAS ... MEESHA IN DSHISKA EXCEL2GOOGLE KULANKA Google Earth .. AMA Excel .. xumahay laakiin Jahligu waa IN Ando 800 dhinicii WITH POINTS IN GOOGLE'm xayiran dunida ..
AHU IYO SALUUUDOS SALUUUSU YAHAY GARGAARKA BARNAAMIJKA ..
Qalabka ayaa dhacay, ma jirto wadada.
Lorena isagu wuxuu leeyahay:
Hey! Ma rabo inaan isticmaalo sababta oo ah waxay dhamaatay, xaggee baan ka heli karaa qalabkan casriyaysan?
Waxaan haystaa dhibco 500 ah oo aan ku qasbanahay inaan gogol dhigo dhulka google!
Salka ay taageerto waa:
isku duwo iyo
sare u qaadidda
Shan wadaag. Maxay yihiin beerahaaga?
Waxaan la shaqeeyaa Epoint2GE qalab aad u wanaagsan, laakiin waxaan shaki ku qabaa inaan ilaa iyo hadda sawirayo qiyaastii 4 kun oo dhib oo wax dhibaato ah igama lihi laakiin markaan xusho khaanadda 5ª taasi waxay noqon laheyd midka ka kooban sharraxa barta, markii la abuurayo faylka KML Waxaan helaa sanduuqa wada hadalka oo oranaya "qaladku '1004' wuxuu ku dhacay waqtiga la joogo: Khaladaadka lagu qeexey dalabka ama shayga" Waan ka mahadcelin lahaa haddii aad iga caawin kartaan dhibaatadan.
SUSANA isagu wuxuu leeyahay:
Ku mahadsan YIHIIN KALA DUWAN, WAA MAXAY!
Eric isagu wuxuu leeyahay:
si aad u awooddo inaad isticmaasho barnaamijkan barnaamijka kaliya ee aad leedahay si aad u beddesho taariikhdaada kombuyuutarka ilaa sanadka 2007 iyo diyaar
si aad u isticmaasho barnaamijka excel, laysanka dhacay wakhtigaa waa inaad beddeshaa taariikhda kombiyuutarka ilaa sanadka 2007
Ma aaminsani Oo magaaladee bay ka yimaadeen?
samsa isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo! Su'aal aan cago-jugleyn: Waxaan haystaa cinwaanada 3.000 (dariiq iyo lambar) oo ku yaal xaashi dheeri ah, laakiin ma haysto isuduwayaasha. Ma jirtaa qaab kasta oo lagu soo geli karo liiskaan Google Earth iyo in la aqoonsado cinwaannada si ay u sameeyaan dhul ballaaran?
Waxa aan u baahanahay waa inaan ka fogaado buug-gacmeedka buug kasta.
Sababtoo ah qoraallada qalabkan waxay sameeyeen taariikhda dhicitaanka, iyo wakhtigaas ayaa la dhaafay.
Burner15 isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan, qof ma kuu sharixi karaa sababta marka la isku dayayo in la abuuro faylka KML, WINDOW wuxuu ka soo baxaa SHAQADA BILAASH EE BETA. Nidaamku wax shuruud ah kuma jiraa? sldos
Maxaa dhacaya waa in shahaadooyinka ay tahay inay ku jiraan jajab tobanle, tusaale ahaan
Hoose file Epoint2GE iyo isku dayaan si loogu badalo isuduwaha dhigaha iyo loolka laakiin file abuuray ma laha bar-kasta, wadataa ay u soo galaan waa kuwan tusaale ahaan 78 ° 07 '42 "O, 05 ° 55' 03" S I caawin kara arrintan.
Adrian isagu wuxuu leeyahay:
Hoose beta ah, laakiin meesha aan descagar kartaa lacag la'aan ah ... .ama sida Habra algunamanera tago uu ka dhacayo; / ... Saludos ^^
Waad ogtahay inaan furayo barnaamijka, laakiin waxay ii muuqataa aniga oo dhammaaday
Sure, boostada kale ayaan ka hadalnaa qalabka qaarkood
habka waa in la keydiyo macluumaadka faylka kml, ka dibna codsiyadani waxay kuu bedelayaan kml si aad u sarreeya, dxf ama shp
bashaash isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u arkaa mid aad u wanaagsan, laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay jirto hab lagu isku gudbiyo iskudhafyada xayawaanka qoryaha lagu abuuray dhulka google-ga si loo soo saaro falanqaynta macaamiisha oo dabadeedna la shaqeeyaan arjiga.